HỌRỌ NCHEKWA. EGWUREGWU NGWUDATA NTUGHARỊ KACHASỊ ELU - ARCHIVERS - 2019
Họrọ nchekwa. Egwuregwu Ngwudata Ntugharị kachasị elu
N'akwụkwọ taa, anyị ga-elele ebe nchekwa kachasị mma maka kọmputa na-agba Windows.
N'izugbe, nhọrọ nke nchekwa, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-edekọ faịlụ, abụghị ngwa ngwa. Ọzọkwa, ọ bụghị mmemme niile ndị na-ewu ewu na-enweghị nnwere onwe (dịka ọmụmaatụ, WinRar a ma ama bụ programware program, ya mere nyocha a agaghị agụnye ya).
Site n'ụzọ, ị nwere ike ịnwe mmasị na otu isiokwu gbasara nchekwa data na-agbakwụnye faịlụ.
Ya mere, gaa n'ihu ...
Site na saịtị: //7-zip.org.ua/ru/
Enweghi ike itinye nchekwa a na ndepụta nke mbu! Otu n'ime ndị na-edeba ihe nchekwa kachasị ike na otu n'ime nrụgide kachasị ike nke mkpakọ. "Ọdịdị" 7Z "na-enye ezigbo mkpakọ (dị elu karịa ọtụtụ usoro ndị ọzọ, gụnyere" Rar ") ma ọ bụghị itinye oge buru ibu na nchekwa.
Mgbe ntinye aka na faịlụ ọ bụla ma ọ bụ folda, menu Explorer na-apụta n'ime ebe a na-etinye igbe nchekwa a n'ụzọ dị mma.
Site n'ụzọ, enwere ọtụtụ nhọrọ mgbe ị na-emepụta otu archive: ebe a ị nwere ike ịhọrọ ọtụtụ nchịkọta archives (7z, zip, tar), ma mepụta archive nke na-ewepu onwe ya (ọ bụrụ na onye na-agba faịlụ ahụ enweghị ihe nchekwa), ị nwere ike ịtọ paswọọdụ na encrypt Archive ka ọ ghara ma ị gaghị ahụ ya.
ntinye ntinye na nhazi nke onye nduzi;
akwa compression ratio;
ọtụtụ nhọrọ, ọ bụ ezie na ihe omume ahụ ejighị ya mkpa - ya mere ọ gaghị adọpụ uche gị;
kwadoo ọtụtụ usoro iji wepu - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro niile nke oge a ị nwere ike ịmeghe.
Achọpụtabeghị nkwenye. Ma eleghị anya, ọ bụ naanị na oke mkpokọta nke nnukwu faịlụ, usoro ihe a na-eburu kọmputa ngwa ngwa, na ngwaọrụ ndị na-adịghị ike ka ọ nwere ike ikwusi.
Download njikọ: //ru.hamstersoft.com/free-zip-archiver/
Ọkọlọtọ na-adọrọ mmasị na-akwado nkwado maka ụdị faịlụ ndekọ archive kachasị mma. Dị ka ndị mmepe ahụ, ndị na-emepụta ihe nchekwa a na-ede ọtụtụ ugboro ngwa ngwa karịa usoro mmemme ndị ọzọ. Ọzọ, tinye nkwado maka multi-core processors na zuru!
Mgbe ị mepee ihe ọ bụla ederede, ị ga-ahụ ihe dị ka windo na-esonụ ...
E nwere ike ịhụ usoro ihe omume a dị mma nke oge a. A na-egosipụta nhọrọ niile dị mkpa na ebe kachasị anya ma ị nwere ike ịmepụta ebe nchekwa na ngwa ngwa ma ọ bụ kewaa ya n'ọtụtụ akụkụ.
Nhazi oge a;
Onu ogugu nchikota;
Nwekọrịta dị mma na Windows;
Ọrụ ngwa ngwa na oke ogo mkpakọ;
Ọ bụghị ọrụ dị ukwuu;
Na kọmputa mmefu ego, usoro ihe omume ahụ nwere ike ịkwụsịlata.
Bido na saịtị: http://www.izarc.org/
Ka anyị malite n'eziokwu na nchekwa ihe a na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Windows niile: 2000 / XP / 2003 / Vista / 7/8. Tinye nkwado zuru ezu ebe a. Asụsụ Russian (site n'ụzọ, ọtụtụ iri na abụọ n'ime ha nọ na mmemme)!
Ekwesiri ighota nkwado buru ibu nke otutu ulo akwukwo. Fọrọ nke nta ka enwere ike ịchọta ihe ndekọ niile n'ime usoro a wee wepu faịlụ ha! M ga-enye nseta ihuenyo dị mfe nke usoro ntọala ahụ:
Ọ gaghị ekwe omume ịghara ịhụ mmemme dị mfe nke mmemme ahụ n'ime Windows Explorer. Iji mepụta ebe nchekwa, pịa na nchekwa ahụ achọrọ ma họrọ ọrụ "gbakwunye na ebe nchekwa ...".
Site n'ụzọ, ma e wezụga "zip", ị nwere ike ịhọrọ ụdị iri na abụọ maka mkpakọ, n'etiti nke a nwekwara "7z" (nchịkọta compression karịrị nke "usoro" rarị)!
Nnukwu nkwado maka ụdị usoro archive dị iche iche;
Nkwado maka asụsụ Russian zuru ezu;
Nwee ọkụ na mma;
Usoro mmemme ngwa ngwa;
Na saịtị: http://www.peazip.org/
N'ozuzu, usoro dị oke mma, ụdị "middling", nke ga-adịrị ndị ọrụ adịghị arụ ọrụ na ebe nchekwa. Mmemme dị oke ezu iji wepu ihe ọ bụla ederede wepụtara site na netwọk ugboro abụọ n'izu.
Otú ọ dị, mgbe ị na-ekepụta akwụkwọ, i nwere ohere ịhọrọ ụdị 10 (ọbụna karịa ọtụtụ usoro a na-ewu ewu nke ụdị a).
Ọ dịghị ihe dị oke ụba;
Nkwado maka usoro niile a ma ama;
Minimalism (na ezi uche nke okwu).
Enweghị nkwado maka asụsụ Russian;
Mgbe ụfọdụ, ihe omume ahụ anaghị adịte aka (mmụba nke ihe onwunwe PC).
A na-edebe usoro ihe omume na China. M ga-agwakwa gị ụlọ nchekwa na-adịghị njọ, nwere ike dochie WinRar anyị (Site na ụzọ, mmemme ahụ yiri nnọọ). A na-ewu HaoZip n'ụzọ dị mfe n'ime onye nyocha na ya mere ị chọrọ naanị ihe abụọ 2 clicks iji mepụta archive.
Site n'ụzọ, ọ gaghị ekwe omume ịghara ịma nkwado nke ọtụtụ usoro. Dịka ọmụmaatụ, na ntọala ha ugbu a 42! Ọ bụ ezie na ọ kachasị ewu ewu, nke na - enwekarị nsogbu - ọ bụghị ihe karịrị 10.
Mmekọrịta dị na onye nduzi;
Nnukwu ohere na nhazi na ntọala nke usoro ihe omume maka onwe ha;
Nkwado usoro 42;
Akwadoro nile nke edere n'isiokwu ahụ kwesịrị ilebara anya. A na-echeghari ha niile ma na-arụ ọrụ ọbụna n'ime Winows 8 nke ọhụrụ. Ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ na oge ochie, dịka ọ dị, usoro ọ bụla edepụtara n'elu ga-adịrị gị mma.
N'uche m, nke ka nke kacha mma, otu ihe ahụ: 7 zip! Ogologo mkparịta ụka dị elu, yana nkwado nke asụsụ Russian na idozi ngwa ngwa na Windows Explorer - karịa otuto niile.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ usoro nchịkọta akụkọ na-enweghị atụ, ana m akwado ịhọrọ HaoZip, IZArc. Ike ha dị nnọọ mma!
Nwee ezigbo nhọrọ!
https://termotools.com ig.termotools.com © Archivers 2019